पुस्तक दिन: पढ्नको लागि आवश्यक पुस्तकहरू | वर्तमान साहित्य
आज छ अप्रिल २,, पुस्तकको दिन र धेरैको त्यो मितिमा किताब किन्ने परम्परा छ, यो डिजिटल वा कागज होस्। यदि तपाईं ती मध्ये एक जो पढ्नको लागि जोशिला हुनुहुन्छ र अझैसम्म कुनै पुस्तकमा तपाईंको आँखा राख्नुभएको छैन भने हामी तपाईंलाई केही आवश्यक पुस्तकहरू पढ्न सिफारिस गर्दछौं।
यसका लागि हामीले ठूला, मध्यम र सानाका लागि पुस्तकहरू लिएका छौं किनभने हामीलाई लाग्छ कि ती नयाँ लेखकहरू र कथाहरू पत्ता लगाउनका लागि उत्तम हुन्छन्। तपाईं कुन राख्नुहुनेछ?
1 पुस्तक दिनमा पढ्नको लागि आवश्यक पुस्तकहरू
1.1 डेलपारासो, जुआन डेल भल
1.2 पुस्तक दिन: एक्विटानिया, ईवा गार्सिया सेन्ज डे उर्टुरी
1.3 सिरा, मारिया ड्युडास
1.4 पुस्तक दिन: क्याम्प, निलो जीन्स
1.5 एक्लो रानी, ​​जर्ज मोलिस्ट
1.6 पुस्तक दिन: तपाई र म बीच एक मुटु, मेगन म्याक्सवेल
1.7 राम्रो खाना पकाउन। Rec ० rec रेसिपीहरू जुन सधैं राम्रो हुन्छन्, कार्लोस अर्गुइआनो
1.8 पुस्तक दिन: मध्यरात पुस्तकालय, म्याट हाइग
1.9 तपाईं एक राम्रो जीव हुनुहुन्छ! सोफी लिन्डे
1.10 पुस्तक दिन: सोल गेम, जेभियर कास्टिल्लो
पुस्तक दिनमा पढ्नको लागि आवश्यक पुस्तकहरू
पुस्तकको दिन एक क्षण हो जब साहित्य यसको ठूलो दिन बाँच्छ। सबै कुराको बावजुद, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले यस दिनलाई पढ्न प्रोत्साहित गर्न नयाँ प्रविधिहरू कसरी प्रयोग गर्ने जानेका छन्, जुन शारीरिक रूपमा गर्न नसकिने भए पनि यो अन्य वर्षहरूमा भयो। त्यसैले पुस्तक दिनलाई श्रद्धांजलि तिर्ने एक तरिका एउटा किन्नु हो। तर त्यहाँ बजारमा लाखौं मानिसहरु छन्, त्यसैले हामी यहाँ तपाईलाई छोड्दैछौं हामीले सोचेका तीहरूको चयन तपाईंको पुस्तकालयमा हुनुपर्दछ।
डेलपारासो, जुआन डेल भल
हामीले बनाउने पुस्तक दिनको लागि पहिलो किताब सिफारिस यो जुआन डेल भलबाट हो। र हामी यो गर्छौं किनभने समाचार हालसालै यसलाई थाहा भएको छ यो एक टेलिभिजन श्रृंखला मा अनुकूलित हुन गइरहेको छ। त्यसोभए उनीहरूले यो प्रकाशित गर्नु भन्दा पहिले तपाईले पुस्तक पढ्नु भयो भने यसले चोट पुर्याउँदैन, ताकि तपाईले कहानीमा वफादार रहेको छ कि छैन भनेर जान्न सक्नुहुन्छ।
कथानकका लागि, हामी आफैंलाई एक ठाउँमा, डेल्पाराओसो भेट्टाउँछौं जुन सुरक्षित, विलासी र दिनमा २ 24 घण्टा सुरक्षित छ। तर भावनाहरूको यस ठाउँमा स्थान हुन्छ र कहिलेकाँही, ती अपेक्षित हुँदैनन्।
पुस्तक दिन: एक्विटानिया, ईवा गार्सिया सेन्ज डे उर्टुरी
यस पुस्तकको साथ उठाइएको थियो ग्रह पुरस्कार २०१ र जसले यो पढेका छन् यसको बारेमा धेरै राम्रो समीक्षा छोडेका छन्। यो ऐतिहासिक कुरा हो, किनकि यसले हामीलाई वर्ष ११1137 मा राख्नेछ, ड्यूक अफ अकिटाइनको कहानी र साथमा एक ऐतिहासिक थ्रिलर जुन बदला, लडाई र अनाचारले भरिएको छ। यदि तपाईंलाई यस प्रकारको कथा मनपर्दछ भने तपाईं पुस्तकको दिनमा यसमा एक नजर लिन सक्नुहुन्छ।
सिरा, मारिया ड्युडास
मारिया ड्युडेसले लामो समयदेखि पुस्तक प्रकाशित गरेकी थिइनन्, त्यसैले यो पुस्तकको दिनका लागि एक नवीनता हो, यदि तपाईंलाई लेखक मनपर्‍यो भने सायद एक आवश्यक चीज हुन सक्छ।
यसमा तपाईंसँग एक मुख्य महिलाको रूपमा हुनेछ जो दोस्रो विश्वयुद्ध पछि, यो आफैलाई पुनर्जागर गर्नु पर्छ र ब्रिटिश गोप्य सेवाहरूको सहकार्यमा संलग्न हुनबाट रोकिनुहोस् अरू केहि बन्नको लागि। तर केमा?
पुस्तक दिन: क्याम्प, निलो जीन्स
शिविर ((बाहिर ...
नीलो जीन्स एक युवा लेखक को रूप मा दुनिया भर मा परिचित छ। अझै केही समय पहिले उनले हामीलाई अदृश्य केटीको साथ आश्चर्यचकित गरे, एक थ्रिलर षडयन्त्रले भरियो। र अब उनी यो साहित्यिक विधाको साथ दोहोरिन्छन्।
शिविरमा हामी २ 23 बर्ष मुनिका केटाहरूको समूहको कथा भेट्न जाँदैछौं जसलाई विशेष शिविरमा आमन्त्रित गरिएको छ। लक्ष्य तिनीहरू मध्ये एक मध्ये एक करोडपतिको दाहिने हात बन्ने हो (र उसको पूरै जीवन बसाउनुहोस्): समस्या यो हो कि, अचानक, संयोजकहरू हराउँछन् र एउटा केटोको मृत्यु हुन्छ। र बाँकी सुरक्षित छैनन्। तर किन?
एक्लो रानी, ​​जर्ज मोलिस्ट
रानी एक्लै (लेखक ...
के तपाईंलाई लाग्छ कि इतिहासमा त्यहाँ कुनै महिला पात्रहरू थिएनन् जसले महान् कार्यहरू गरे? ठिक छ, यस मामला मा तपाईं गलत हुनुहुन्छ, किनभने तपाईं फेला पार्न जाँदै हुनुहुन्छ नयाँ ताजको रानीको अनुभव, अनुभवहीन, र कुनै पति छैन, कि उसले आफ्नो राज्यको कब्जा गर्न कोशिस गरिरहेकाहरूलाई एक्लै सामना गर्नुपर्नेछ।
तिनीहरूले पुस्तकमा चेतावनी दिए जस्तै यो एउटा कथा हो जसले स्पेनको भाग्य र भूमध्यसागरको शक्तिलाई परिवर्तन गर्‍यो।
पुस्तक दिन: तपाई र म बीच एक मुटु, मेगन म्याक्सवेल
म्याक्सवेल वारियर्स, .... ....
मेगन म्याक्सवेल सबैभन्दा सफल स्पेनिश लेखकहरू हुन्, विशेष गरी रोमान्टिक विधामा। यद्यपि, त्यहाँ एउटा गाथा छ जुन उनले त्यागिनन र जसका लागि धेरैले उनलाई चिन्न थाले (वास्तवमा "योद्धाहरू" जसरी लेखकले उनका फ्यानहरू बोलाउँदछन्, यी पुस्तकहरूबाट आएका हुन्)।
यो विशेष रूपमा गाथामा छैठो हो, जुन स्वतन्त्र रूपमा पढ्न सकिन्छ। यसमा हामी बस्नेछौं हाराल्ड हरमेनसेन कथा, आफ्नो "भूत र लालसा" भएको मानिस, जसले विगतलाई पछाडि छोड्छ र वर्तमान र भविष्यलाई अँगाल्न खोज्छ।
राम्रो खाना पकाउन। Rec ० rec रेसिपीहरू जुन सधैं राम्रो हुन्छन्, कार्लोस अर्गुइआनो
राम्रो खाना: ... ००
कोरोनाभाइरसको कारण कैदमा परेका धेरैलाई बचाउने खाना पकाउने मध्ये एउटा हो। र भान्साको नजिक पुगिसकेपछि, र हाम्रा आफ्नै हजुरआमा र हजुरआमाहरू हजुरआजको खाना तयार गर्दै धेरै मानिसहरूलाई त्यसो गर्न हिम्मत गर्ने बनाएको छ।
तर निश्चित, व्यंजनहरु आवश्यक छ, त्यसैले कार्लोस अर्गुइआनो, स्पेनका सबै भन्दा राम्रो चर्चित शेफहरू, 900 ०० रेसिपीहरूको संग्रह संकलित छन् त्यसोभए तपाईसँग केहि बर्षसम्म खाना पकाउन पर्याप्त छ।
पुस्तक दिन: मध्यरात पुस्तकालय, म्याट हाइग
को पुस्तकालय ...
मानिसहरू भन्छन् कि, जीवन र मृत्युको बीचमा, त्यहाँ लाखौं पुस्तकहरू सहित तखताहरूको भरिपूर्ण पुस्तकालय छ। यसले व्यक्तिलाई अर्को जीवनको लागि अनुमति दिन्छ जुन तपाईं बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो र यदि तपाईंले अन्य निर्णयहरू गर्नुभयो भने के परिवर्तन हुने थियो भनेर जान्न। त्यहाँ नोरा बीज देखा पर्छ, र परिवर्तन गर्ने अवसर छ। तर के यदि त्यसले लाइब्रेरी नै खतरामा पार्छ?
तपाईं एक राम्रो जीव हुनुहुन्छ! सोफी लिन्डे
तपाईं एक अस्तित्व हुनुहुन्छ ...
यो पुस्तक घरका साना बच्चाहरूको लागि उपयुक्त छ। Years बर्षको उमेरदेखि तपाईं पढ्न सक्नुहुन्छ र यसमा उनीहरूले एउटा उपकरण फेला पार्नेछन् जुन उनीहरूको भावनाहरूसँग व्यवहार गर्न र आफैमा भरोसा गर्न सिक्दछन्।
तिनीहरूले के पाउनेछन्? आत्मविश्वास प्राप्त गर्नुहोस्, डर हटाउन, जागरूकता विकास गर्नुहोस् र पात्रहरूसँग पहिचान गर्नुहोस्।
पुस्तक दिन: सोल गेम, जेभियर कास्टिल्लो
सोल गेम (SUMA)
जेभियर कास्टिलो स्पेनका सबैभन्दा व्यापक रूपमा पढ्ने लेखकहरू मध्ये एक हुन् जुन उसले वर्णन गरेको तरीकाले गर्छ वर्तमान र अतीतलाई गडबड बिना नै मिश्रण गर्नुहोस्। उनका कथाहरू, षडयन्त्र र सस्पेंसले भरिएका छन्, अन्तिम सम्म पाठकलाई उसको पृष्ठहरू बीच चिप्लन राख्छ, र उसले अन्त्य गर्ने अन्तिम अवस्था कत्ति अनुमानित हुँदैन, जुन धेरै माग गर्ने पाठकहरूले सराहना गर्छन्।
यस अवस्थामा कथा १aबर्षे केटीको मृत्युमा केन्द्रित छ।
र त्यहाँ छ पुस्तक दिन को लागी सयौं र पुस्तकहरु सयौं जुन हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्न सक्छौं। पढ्नको शौक बन्न महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै श doubt्का बिना, त्यो पुस्तक पत्ता लगाउनु हो जसले तपाईंलाई भावुक बनाउने र तपाईंलाई सास फेर्ने जस्ता पुस्तकहरू आवश्यक बनाउन कुञ्जी हिट गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » पुस्तक दिन: पढ्नको लागि आवश्यक पुस्तकहरू
सिल्भिया Aguilar भन्यो
म मिगल ईन्जल लिनरेसको पुस्तक n पुरानो प्रकाश र अन्य कथाहरूको पुस्तक सिफारिस गर्न चाहन्छु। छोटो कथा र एक्लो चरित्रहरूको खुशीको खोजीमा रहेका अद्भुत रोमान्टिक पुस्तक। यसले वाक्यांशहरू, परावर्तनहरू र एफोरिज्महरू पनि समावेश गर्दछ जुन तपाईंलाई तपाईंको आफ्नै जीवनबाट खण्डहरू सोच्न लगाउँदछ। अत्यधिक सिफारिश गरिएको !!
सिल्भिया Aguilar लाई जवाफ दिनुहोस्